Waa kuma Daafaca uu Sir Alex Ferguson doonayo inay Kooxda Man United la soo saxiixato xagaagan? – Gool FM
(Manchester) 06 Luulyo 2019. Sir Alex Ferguson ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inay Manchester United la soo saxiixato difaaca ka tirsan kooxda Leicester City ee Harry Maguire.
Red Devils ayaa xan lagu hayey inay weli qosheynayso inay soo qaadato xiddiga xulka qaranka England ee Maguire, inkastoo horayba looga soo diiday dalab 70 milyan oo gini ah oo ay ka gudbiyeen.
Sida ay warinayso Manchester Evening News, Macallinkoodii hore ee halyeyga ah Sir Alex ayaa kooxda uu mudada dheer soo maamulayey ee Man United ku dhiiri geliyey inay dhammaystiraan saxiixa Harry Maguire.
Ferguson ayaa daawaday qaab ciyaareedka 26-sano jirkaan intii lagu guda jiray kulankii ay Man United 4-1 kaga adkaatay Sheffield United sanadkii 2011-kii ee FA Youth Cup, markaasoo uu Maguire malayey kooxda Sheffield.
Ninkan reer Scottish ayaa doonaya in difaacan dhexe loo soo dhaqaajiyo garoonka Old Traffrod ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Maguire ayaa sidoo kale xan lagu hayaa inuu bartilmaameed u yahay kooxaha Manchester City iyo Arsenal, taasoo keentay in kooxda Leicester City ay kordhiso qiimaha ay ku rabto oo ay gaarsiiyo 75 milyan oo gini.